Yekutanga laptop ine AMD neLinux zvinhu mukati inosvika | Linux Vakapindwa muropa
TUXEDO Computers, imwe yemakambani ari kubheja pamalaptop neLinux, akazivisa svondo rino modhi inouya nezvinhu zvinoipatsanura kubva kune dzimwe nzira dzese.
Iyo TUXEDO Bhuku BA15 inofambiswa neiyo AMD Ryzen 5 3500U chip uye inozvirumbidza kuve "yekutanga Linux laptop kushandisa chete AMD zvikamu."
Iyo BA15 inodarika maererano nebhatiri mashandiro, iine yayo 91.25 Wh inotyaira iyo inogona kuendesa kusvika kumahora makumi maviri nemashanu pamutero muhupfumi mamiriro.
"Kunyangwe mumamiriro ezvinhu ezuva nezuva, iyo 15.6-inch laptop inogara kwenguva yakareba, saka unogona kuita basa rako rezuva nezuva, kusevha pawebhu, kunyora maemail uye zvimwe zvinhu zvakawanda kwemaawa gumi nematatu, kunyangwe kutepfenyura 13p vhidhiyo nekupenya pa 1080%, chishandiso chinowana maawa gumi ehupenyu hwebhatiri "inotaura nezvekambani.
Isu tinofara kwazvo kuunza yekutanga nyika AMD-chete uye Linux-preinstalled laptop. Inowanikwa for preorder izvozvi. Sangana neHoryzen itsva!https://t.co/tzy3N08UWE@AMDRyzen @AMDPC pic.twitter.com/OXdz1FD19Y
- TUXEDO Makomputa (@TUXEDOComputers) Dai 22, 2020
Iyo Laptop ine yakasanganiswa Radeon Vega 8 mifananidzo kadhi uye matatu RAM ndangariro sarudzo, zvese kubva kuSamsung. Iyo spike sarudzo inouya ne32GB ye RAM.
Mukuchengetedza, modhi yepasi ine 250GB, asi inogona kukwidziridzwa kusvika ku2TB kwekuwedzera zvishoma.
Iyo 15.6-inch skrini ine yakazara HD resolution uye 300 nits yekupenya, nepo iyo keyboard ichiuya neiyo yepamusoro TUX kiyi.
Kana zviri zvengarava, pane USB 3.2 Type C chiteshi iyo inogona kushandiswa seDisplayPort kana kubhadharisa, maviri USB 3.2 Type A madoko, imwe USB 2.0 Type A chiteshi, pamwe neHDMI, Ethernet, kadhi kuverenga uye slot ye maearphones.
Tuxedo Makomputa anotengesa iyo BA15 ne Ubuntu uye TUXEO_OS, asi kune dzimwe nzira dzakawanda dziripo. Semuenzaniso, kambani inopawo mbiri-bhutsu yekumisikidza neWindows uye inogona kubvisa Linux zvachose kana mutengi achida.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Yekutanga laptop ine AMD neLinux zvinhu mukati inosvika
Laptop? Tava kuita makaro, ndinonzwisisa iyo laputopu uye komputa,
Pindura kuna jaap